🥇 ▷ Gmail waxay bilaabeysaa inay saxaan khaladaadka naxwaha iyo kuwa caadiga ah ✅
Gmail waxay bilaabeysaa inay saxaan khaladaadka naxwaha iyo kuwa caadiga ah
Markaan wax ka qabanno emayl badan maalin kasta mid ka mid ah cabsida ugu badan waa inaan sameyno khaladaad ku qoritaanka xitaa xitaa lacagteenna qaadan kara. Gmail waxay bilaabeysaa inay saxaan khaladaadka naxwaha iyo kuwa caadiga ah.
Ilaa hada, samaynta khaladaadka naxwaha ama qorista si sax ah ayaa noo ahayd masuuliyadeena. Hadda Gmail waxay soo bandhigtay hawl cusub oo tilmaamaysa dadka isticmaala khaladaadka naxwaha iyo qaladka ay galaan marka ay qorayaan emaylka, taa badalkeed waxay soo jeedinayaan in la saxo, inkasta oo ay tahay astaamo karti u leh waqtigan kaliya ee nooca Ingiriisiga ah.
The khaladaadka naxwe ahaan waxaa lagu ogaadaa Gmail iyadoo loo marayo farsamooyinka Sirdoonka Artificial Google (AI), Y waxay kaloo awoodi karaan inay dareemaan kubbad sameeye ama higgaadin, si toos ah u sixi doona qaar ka mid ah ciladaha caadiga ah iyo digniinta isbadalkan si ku meel gaar ah a calaamad hoosta ka xariiq, sida ay shirkaddu ku sharraxday bayaan.
Guul darrada naxwaha ee emayllada waxaa lagu calaamadeeyay buluug halka Gmail ay muujineyso dadka isticmaala talo soo jeedin ku saleysan AI, taas oo la aqbali karo adigoo gujinaya erayga ama jumlad la iftiimiyay. Tani waxay fududaynaysaa isticmaalkeeda.
Qalabkani wuxuu noqon doonaa lagu dhex daro websaydhka ‘Gmail’ adeegsiguna uma baahan doono inuu wax uun dhaqaajiyo maxaa yeelay geyntu waa otomatik. Markaad qoreyso farriintaada, Gmail waxay adeegsan doontaa sirdoonka macmal si looga dhigo talooyin hingaad xariifnimo isla mar ahaantaasna ogaato dhibaatooyinka naxwaha ee suuragalka ah.
Google ayaa taas sharraxay Muuqaalka dib-u-hubinta ayaa lagu joojin karaa goobaha xisaabta Google, taasina waxay bilaabatay in si tartiib tartiib ah loo qaybiyo ilaa iyo Talaadada iyo wixii intaas ka dambeeyay 12-ka Sebtembar qaybinta ayaa guud ahaan noqon doonta laakiin howlaheeda ayaa durba bilaabatay.
Google, waxay ku adkeystaan awood u ku qorista luqado kale. Sirdoonka macmalku waxay awood u yeelan doonaan inay ku aqoonsadaan luqadda
Hawsha ayaa loogu shaqeyn doonaa sidii loogu talagaly dhamaantiis isticmaaleyaasha akoonka Google isla markaana xilligan xaadirka ah soojeedimaha ayaa ku shaqeynaya oo keliya Ingiriisiga. In kasta oo aad garaneyso Google, waxaa dhaqso loogu kordhin karaa luqado badan.
Hadda maxaa Gmail wuxuu sixi doonaa khaladaadka naxwaha iyo khaladaadka higaada Qorista Ingiriisiga waxaan kaga jawaabi karnaa emails soo gala annaga oo aan isticmaalin tarjumaanka Google markasta.